To: जावलाखेल क्लवका वरिष्ठ उपाध्यक्षले राजीनामा दिए
सेताेपाटी, काठमाडौं, साउन ६ - जावलाखेल क्लवका वरिष्ठ उपाध्यक्ष किरोजमानसिंह बस्नेतले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । कामको व्यस्थता र लामो समयदेखि क्लवको साधारणसभा नगरेको भन्दै बस्नेतले पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । ६ वर्षदेखि अहिलेसम्म क्लवको साधारणसभा हुन सकेको छैन् ।
एन्फाको पाँचबर्ष देखिको हिसाबकिताब तीनदिन भित्र बुझाउन निर्देशन
काठमाडौं,साउन ४(सेतोपाटी) - अखिल नेपाल फुटवल संघ एन्फाले गरेको सबै काम कारबाहीको कागजात तीन दिनभित्र पेश गर्न व्यवस्थापिका संसदअन्तर्गतको लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ।
एन्फाभित्र भ्रष्टाचार भएको भन्ने खबर आएपछि छानबिन गर्न भन्दै पाँच वर्ष देखिको लेखा परिक्षण प्रतिवेदनसमेत तीन दिनभित्र वुझाउन समितिले निर्देशन दिएको हो।
नेपाल र कोरिया बराबरीमा
काठमाडौं, साउन ३ - नेपालको यु १६ फुटबल टोलीले कोरियाको अन्डर–१६ फुटबल टोलीसँग बराबरी खेलेको छ।
व्यापक विरोधका बीच धरानको एन्फा टेक्निकल सेन्टर सुरू
भोजराज श्रेष्ठ, धरान, साउन ३ - यस अघि २०६६ सालदेखि गोलप्रोजेक्ट सुरु भएको थियो। तर, अध्यक्ष थापाले बजेट नदिँदा सेन्टर बन्द रहेको थियो भने झण्डै चारमहिना अघि सेन्टर बन्द गर्ने निर्णयसमेत गरेका थिए। त्यसबीचमा अध्यक्ष थापा विभिन्न आर्थिक विवादमा मुछिए। त्यतिमात्रै हैन, उनले कतारबाट ल्याएको फुटबलको रकमसमेत भ्रष्टचार गरेको अभियोगसमेत लाग्यो।
फिफाको स्तरनिर्धारण, जर्मनी शीर्ष स्थानमा, नेपाल १६४ औँ स्थानमा
काठमाडौँ, साउन २ - फुटबल खेलको सर्वाेच्च निकाय अन्तराष्ट्रिय फुटवल महासङ्घ(फिफा)ले सार्वजनिक गरेको बरियता क्रममा विश्वकप विजेता जर्मनी दोस्रोस्थानबाट सबैभन्दा शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ । केही दिन अघिमात्र ब्राजिलमा सम्पन्न विश्वकप फुटबलमा अर्जेन्टिनालाई हराउँदै उपाधि हात पारेको जर्मनी कुल १७२४ अंकका साथ शीर्ष स्थानमा पुगेको फिफाको वेभसाईटमा जनाईएको छ ।
जर्मनी फिफा वरियताको शीर्षमा हुँदा नेपाल १६४औ स्थानमा
काठमाडौं, साउन १ - हालै सम्पन्न विश्वकप फुटबल विजेता जर्मनी फिफा बरियताको शीर्ष स्थानमा उक्लिदा नेपाल १६४औ स्थानमा यथावत रहेको छ।
विश्व च्याम्पियनलाई जर्मनीमा भब्य स्वागत
काठमाडौं, असार ३१(एजेन्सी) - विश्वकप फुटबल च्याम्पीयन जर्मनीका खेलाडीहरुलाई स्वदेशमा भव्य स्वागत गरिएको छ। सोमबार ब्राजिलबाट जर्मनी पुगेका विश्वकप विजेता हुने खेलाडीहरुलाई बर्लिनको सडकमा लाखौं फुटबल समर्थकहरुले भव्य स्वागत गरेका थिए ।
ब्राजिलको लज्जास्पद हारपछि कोच स्कोलारीको राजिनामा
साउ पाउलो, असार ३० (सेतोपाटी) - ब्राजिली कोच लुइज फिलिप स्कोलारीले आफ्नो टिमले सेमिफाइनलमा व्यहोरेको लज्जास्पद हारका कारण राजिनामा गरेका छन्। २००२ मा स्कोलारी नेतृत्वकै ब्राजिली टिमले विश्वकप जितेको थियो भने यसपटक आयोजक टिम चौथौमात्र भयो।
ब्राजिलले सेमिफाइनलमा जर्मनीसँग ७-१ को ...
विश्वकपमा उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गरेका मेसीलाई गोल्डेन बलबाट सम्मानित गरेको छ।
रोड्रिगेजलाई गोल्डेन बुट
रियो दी जेनेरियो, असार ३०(एजेन्सी) - ब्राजिलमा जारी २०औ संस्करणको फिफा विश्वकप– २०१४ मा कोलम्बियाका रोड्रिगेज सर्वाधिक गोल गर्दै गोल्डेन बुट पाएका छन्।
विश्वकपको भव्य समापन समारोहमा साकिराको गरम प्रस्तुती
रियो दी जेनेरियो, असार ३०(एजेन्सी) - एक भव्य समारोहबीच विश्वकप फुटवल २०१४ को समापन भएको छ। उक्त अवसरमा साकिराले रियो द जेनेरियोमा आफ्नो प्रस्तुति देखाएकी छन्।
विश्वकप २०१४ को उपाधि जर्मनीलाई
रियो दी जेनेरियो, असार ३०(एजेन्सी) - ब्राजिलमा सम्पन्न २० औ संस्करणको विश्वकपको उपाधि जर्मनीले जितेको छ।
रियो दी जेनेरियोस्थित माराकानामा रंगशालामा भएको अत्यान्त रोमाञ्चक खेलमा अर्जेन्टिनालाई १-० गोल अन्तरले हराउँदै चौथो पटक विश्वकपको उपाधि उचालेको हो।
फाइनल खेल इटालियन रेफ्रीले खेलाउने
-एजेन्सी, रियो दे जेनेरियो, असार २९ - ब्राजिलमा जारी २० औं विश्‍वकप फुटबलको फाइनल खेल इटालियन रेफ्री निकोल रिजोलीले खेलाउने भएका छन्।
यी दश 'स्टार' मध्ये कसले लैजाला सुनको भकुण्डो
काठमाडौं, असार २९ - विश्वकपमा उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्ने एकजाना खेलाडीलाई फिफाले सुनको भकुण्डो (गोल्डेन बल) दिन्छ। त्यसका लागि फिफाले १० जाना खेलाडीको नाम मनोनयन गरेको छ।
गोलवर्षा, खेलाडीको बेग, पासमा जर्मनी सशक्त
सेतोपाटी संवाददा, काठमाडौं, असार २९ - छ खेलमा जर्मनीले १७ गोल गरेको छ, अर्जेन्टिानले ७
लिग चरणदेखि सेमिफाइनलसम्मा डिफेन्सदेखि स्ट्राइकरसम्मले गोल हानेका हान्यै छन्।
पाँच पटकको विश्वविजेता ब्राजीललाई सेमिफाइनलमा सात गोल लगाइदिएर विपक्षी टिमहरुको सातो खाइदिएको छ
विश्वकप विजेतालाई कति पुरस्कार?
एजेन्सी, साओ पाउलो, असार २९ - विश्वकप फुटबलको पुरस्कार राशि कति होला त्यो सधैं चासोको विषय बन्दै आएको छ। विश्व फुटबल महासङ्घ फिफाले प्रत्येक संस्करणमा पुरस्कार राशिलाई बढाउँदै आएको छ। यसअघि अफ्रिकामा भएको विश्वकपको १९औँ संस्करणमा पनि फिफाले पुरस्कारको राशिमा वृद्धि गरेको थियो।
ब्राजिललाई हराउँदै नेदरल्याण्ड विश्वकपमा तेस्रो
ब्रासिलिया (एजेन्सी), असार २९ - विश्वकपको आयोजक राष्ट्र ब्राजिललाई हराउँदै नेदरल्याण्ड प्रतियोगितामा तेस्रो भएको छ। आइतबार बिहान भएको खेलमा ब्राजिल नेदरल्याण्डसँग ३-० ले गोल अन्तरले पराजित भएको हो। सेमिफाइनलमा जर्मनीसँग इतिहासकै सर्मनाक हार बेहोरेको ब्राजिल प्रतियोगितामा चौथो हुँदै विश्वकपको यात्रा टुग्यायो।
गोल्डन बलका दावेदारको मनोनयन सार्वजनिक
एजेन्सी, काठमाडौं, असार २८ - विश्वकप फुटबलमा फिफाले गोल्डेन बलका लागि मनोनयन सार्वजनिक गरेको छ।
१२ औं आहा रारा गोल्ड कपबाट २९ लाख बचत
पोखरा, असार २८(सेतोपाटी) - मोफसलको प्रतिष्ठित बाह्रौं संस्करणको आहा रारा गोल्डकप २०७० बाट २९ लाख १ हजार ७ सय ५७ रुपैयाँ वचत भएको छ। गत फागुन २० गते देखि चैत १ गतेसम्म पोखरा रंगशालामा सञ्चालन भएको उक्त प्रतियोगिताबाट सो रकम बचत भएको सहारा क्लबका सल्लाहकार एवं अर्थ संयोजक प्रकाश शेरचनले बताए।
तेस्रो स्थानका लागि ब्राजिल र नेदरल्यान्ड्स भिड्ने
काठमाडौँ, असार २८ - विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता सन् २०१४ को तेस्रो स्थानका लागि भोलि बिहान ब्राजिल र नेदरल्यान्ड्स आमनेसामने हुने भएका छन् । ब्राजिलको ब्रासलियामा हुने सोे प्रतियोगिताको खेल बिहान १ बजेर ४५ बजे सुरु हुनेछ ।
बिमल घर्तीको पेनाल्टी मिसमा नेपालल यु १६ ले कोरियामा बराबरी खेल्यो
काठमाडौं, असार २७(सेतोपाटी) - आगामी सेप्टेम्बरमा थाईल्याण्डमा सञ्चालन हुने एएफसी यु १६ च्याम्पियनसिप २०१४ को लागि तयारी गर्न कोरिया पुगेको नेपाली युवा टोलीले स्थानीय बोन हाइस्कुल टिमसँगको मैत्रीपूर्ण खेलमा शुक्रबार बराबरी खेलेको छ।
एजेन्सी, काठमाडौं, असार २७ - अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ फिफाले अर्जेन्टिनालाई कारबाही गरेको छ।
मेसीले वर्डकप उचाल्नु फुटबलको लागि राम्रोः नेयमार
काठमाडौं, असार २७ - 'उनी(मेसी) विश्व च्याम्पियन हुन लायक छन्,' नेयमारले भने। तर उनले जर्मनी र अर्जेन्टिना दुबैलाई जितको शुभकामना दिए।
कोलम्बियन खेलाडी जुआन क्यामिलो जुनिगा नेयमारको ढाडमा चढ्दा उनको मेरुदण्डमा गहिरो चोट लागेको थियो। 'त्यो चोट दुई सेन्टिमीटर यता लागेको भए म आज ह्विल चेयरमा हुने थिए
सुआरेजको अपिल फिफाद्वारा खारेज
एजेन्सी, काठमाडौं, असार २७ - फिफा अपिल समितिले उरुग्वेयन खेलाडी सुआरेजको अपिल अस्वीकार गरेको छ।
नेदरल्याण्डलाई हराउँदै अर्जेन्टिना २४ वर्षपछि विश्वकपको फाइनलमा
एजेन्सी - ब्राजिलमा जारी विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको अन्तिम सेमीफाइनलमा नेदरल्याण्लाई हराउँदै अर्जेन्टिना फाइनलमा प्रवेश गरेको छ।
नेदरल्याण्डकी रानी अर्जेन्टिनाको पक्षमा
एजेन्सी, असार २५ - आफ्नो मुलुक नेदरल्याण्ड विश्वकप फुटबलमा अर्जेन्टिनासँग भिड्न लाग्दा त्यहाँकी रानी भने अर्जेन्टिनाको पक्षमा उभिएकी छिन् । नेदरल्याण्डकी रानी म्याक्सीमाले आफ्नै देश छाडेर अर्जेन्टिना रोजेकी हुन् । राजा विलियम अलेक्जेन्डर भने नेदरल्याण्डकै पक्षमा छन् ।
विश्वकप फुटबलको उपाधि लिएर घर फर्कने मेसीको चाहना
एजेन्सी , असार २५ - अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनल मेसीले विश्वकप फुटबलको उपाधि लिएर घर फर्कने आफ्नो इच्छा भएको बताएका छन् । यस वर्षको विश्वकप जित्नु नै आफनो करियरको ठुलो उपलब्धी हुने उनले बताएका छन् ।
नेदरल्याण्डका प्रशिक्षकलाई भानपर्सिबाट पनि उत्तिकै आश
एजेन्सी, असार २५ - पेटको समस्याका कारण अस्वस्थ रहेका नेदरल्याण्डका कप्तान रोवन भानपर्सि अर्जेन्टिनाका लागि खेल्न फिट भएका छन् । नेदरल्याण्डलाई अन्तिम ४ मा ल्याउन निकै उत्कृष्ट प्रर्दशन गरेका उनी पेटको समस्याबाट ग्रसित थिए । पेटमा समस्या देखिएपछि उनलाई अलग राखेर प्रशिक्षण दिइएको थियो ।
खेलाडी छनौट, टिमको रणनीति मैले बनाएको हुँ, हारको जिम्मेवारी लिन्छु - स्कोलारी
सेताेपाटी, काठमाडौं, असार २५ - ब्राजिलका फुटबल प्रशिक्षक लुइस फिलिप स्कोलारीले जर्मनीसँग हार ब्यहोरेको भन्दै क्षमा माफी मागेका छन् । जर्मनीसँग ७–१ ले पराजय भएको दिनलाई उनले आफ्नो जीवनकै सबैभन्दा खराब दिन भनेका छन् । पराजयको जिम्मेवारी लिदै उनले माफी मागेका हुन् ।
अर्जेन्टिनाले नेदरल्यान्ड्मध्य को पुग्ला त फाइनलमा !
काठमाडौँ,असार २५ - विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको अन्तिम सेमिफाइनल भिडन्तमा बुधबारराती अर्जेन्टिनाले नेदरल्यान्ड्सको सामना गर्ने भएको छ । यी दुई टोलीबीचकोको खेल ब्राजिलको साओ पाउओ रङ्गशालामा राती पौने १ बजे हुनेछ । विश्वकप यात्रामा आठपटक भिडेका अर्जेन्टिना र नेदरल्यान्ड्स दुवै टिम उपाधि दाबेदारका रूपमा मानिएको छ ।